Internet Horo yeMukurumbira. Iyi ndiyo nhengo itsva | Linux Vakapindwa muropa
Mhemberero yekusarudzwa kwenhengo nyowani dzeInternet Hall yeMukurumbira.
Iyo Internet Horo yeMukurumbira® iri chaiyo miziyamu uye chirongwa chekuziva , que pemberera nhoroondo yekurarama yeinternet uye kubva kuvanhu vane zvipo zvisingaenzaniswi zvakaita kuti Internet ivepo, kuwanikwa kwayo uye kushandiswa pasi rese, uye shanduko yayo.
Iyo yakavambwa mu2012 neInternet Society. Nhengo dzekutanga dzakaziviswa muna Kubvumbi 23, 2012 kumusangano wesangano reGlobal INET. Musangano uyu wakaitirwa kuGeneva, Switzerland.
1 Chii chinonzi Internet Hall yeMukurumbira?
2 Maitiro ekudoma
2.1 Vakasarudzwa veiyo 2019 edition
Chii chinonzi Internet Hall yeMukurumbira?
Andrew Sullivan, CEO weInternet Society, anotsanangura zvinangwa zveInternet Hall of Fame:
Iko kushanduka kweInternet inyaya yezvakawanda, zvakawanda zvipo. Mumwe nemumwe wevanhu vari muInternet Hall of Fame akaita mupiro wakakosha kunyaya iyoyo. IInternet Sosaiti inoda kuve nechokwadi chekuti nyaya idzi dzinotaurwa nekuchengetedzwa
Sangano inokoka vanofarira internet kubva kutenderera nyika kutaura kune vamiriri vako . Kunyorera zvikumbiro kunoongororwa uye kuongororwa kuti vaone kuti vanosangana nematanho uye kukodzera nzira. IInternet Hall yeMukurumbira Advisory Board, inoumbwa neboka rakasarudzwa revaimbo pinda, inokonzeresa sarudzo yekupedzisira yevanopinda.
Vakasarudzwa veiyo 2019 edition
Gore rino ivo vakapinzwa muInternet Hall of Fame vanhu gumi nemumwe kubva kunyika nhanhatu kutenderera pasirese, kusanganisira Peru, Japan, Brazil, Netherlands, Togo neUnited States. Zvese zvinozivikanwa nekuda kwavo kupayona uye ekuona mipiro mukukura kwepasirese, kuwana uye chengetedzo yeInternet. Uye zvakare, zvinoonekwa kuti vakawedzera kusvika kweInternet kumatunhu matsva nenharaunda, vakabatsira kukurudzira kunzwisiswa kukuru kwenzvimbo iyo Indaneti inoshanda, uye vakavandudza kuchengetedzeka kuwedzera kuvimba kwevashandisi kunetiweki.
Rangarira Andrew Sullivan? Pamhemberero yekupinda, yakaitirwa muSan José, Costa Rica, director director weInternet Society akati:
“Dhizaini yeInternet yagara ichiita kuti vanhu vaone chinetso voenda kumabasa kuti vagadzirise.
Vakasarudzwa gore rino vakatipa isu chose chikuru chipo chemafambiro avo ekugadzira kumatambudziko avakakurukura nezveInternet. Tinogona kuwana kurudziro kubva kwavari kuti vatarisane nedenderedzwa rinotevera rematambudziko
Iyi ndiyo nhengo itsva:
Adiel Akplogan (Africa): Akaenderera mberi neInternet muAfrica uye akashanda seMutungamiriri Executive weRegional Internet Registry ye Africa.
Kimberly Claffy (United States): Yaive piyona mumunda wekuunganidzwa kwedata, kuyerwa uye kuongororwa paInternet.
Douglas Comer (nyika dzakabatana): Akanyora akateedzana ekutanga emhando dzemabhuku echinyorwa achitsanangura masainzi eInternet dhizaini uye ekutaurirana mapuroteni
Elise Gerich (United States): Akashanda mukuchinja kubva kuNSFNET kuenda paInternet yanhasi uye mukushandurwa kwemabasa eInternet Akapihwa manhamba Chiremera kubva kuhurumende yeUS kuenda kunharaunda ine vanhu vazhinji.
Larry Irving (nyika dzakabatana): Aive mumwe wevanosimudzira kuzivikanwa kweDigital Divide muUnited States, achikurudzira kufarira kwepasirese kwenyaya iyi.
Dan Lynch (United States): Akakurudzira kubvumidzwa kweTCP / IP protocols uye akaita chinzvimbo chakakosha mukutyaira Internet kuenda kune yekutengesa network.
Jean Armor Polly (United States): Yakapayona mukana weInternet yemahara mumaraibhurari yeruzhinji.
José Soriano (Peru): Aive mumwe wevatungamiriri mukuunza iyo Internet kuPeru uye akagadzira inoteedzerwa "yeruzhinji Internet" modhi.
Michael Stanton (Brazil): Akashanda pakuunza Indaneti kuBrazil, uye anoramba achitora chikamu mukugadzirwa uye kutumirwa kwema scalable optical network muSouth America nepasirese.
Klaas Wierenga (Netherlands): Akagadzira eduroam, yepasi rese yeWi-Fi yekufambisa sevhisheni yenzvimbo dzekudzidzira nekutsvaga munharaunda dzinopfuura zana.
Suguru Yamaguchi (Japan): anga ari piyona mukutsvaga kwekuchengetedzeka uye mutungamiri wenyika mukutumirwa kwayo; uye yakavamba Asia Pacific Broadband Internet Research Project uye iyo Satellite Dzidzo Network Project.
Gore rino ndiyo kekutanga mhemberero iyi yakaitirwa muLatin America. Sarudzo yeCosta Rica senzvimbo yechiitiko nekuti varongi vanozviona muenzaniso wakanaka wekuti ungashandise sei nzira yekubatana mukutonga kweInternet uye kutora matanho akarongeka ekuvhara dhijitari munyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Internet Horo yeMukurumbira. Iyi ndiyo mitezo mitsva
Waini 4.17, D9VK 0.22 uye DXVK 1.4.1: kunze nenhau dzemitambo